तपाईको हातमा हुने राज योगलाई पनि नष्ट गर्न सक्ने यस्तो अशुभ ‘निशान’ ! – Khabaarpati
November 17, 2020 November 17, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on तपाईको हातमा हुने राज योगलाई पनि नष्ट गर्न सक्ने यस्तो अशुभ ‘निशान’ !
काठमाडौँ । सामुन्द्रिक शास्त्रमा दीप एक निशान हो जसले दुर्भाग्य र दुर्घटनाको संकेत गर्छ। यसको अलवा हस्तरेखाको अनुसार तपाईको हातका रेखामा कुनै शुभ योग बनिरहेको छ भने पनि यो एक निशानले त्यसबाट आउने फल कम गराउँछ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
हत्केलाको हरेक ठाउँमा हुँदा यस निशानले अलग अलग फल दिन्छ । तपाईको हातको लाईफ लाईनमा यो निशान देखिएको छ भने कुनै चोट पटक लाग्न सक्ने, अथवा दुर्घटना पर्नसक्ने संकेत गर्छ। त्यसैगरी हातको तेस्रो औँलामा यो निशान देखिएको छ भने धन हानी हुन सक्छ। यो निशान युवतीको बाँया हात र पुरुषको दाँया हातमा देखिँदा प्रभाव देखिन्छ।
कुन औँलामा देखिँदा कस्तो प्रभाव
१. बुढी औँला : हातको बुढी औँलाको तल्लो भागमा देखिँदा आत्मा विश्वास र महत्वकांक्षा दुवै कम हुनसक्छ ।२. चोर औँला :चोर औँला अर्थात दोस्रो औँलाको तलपट्टी शनी पर्वतमा यो निशान देखियो भने काममा बाधा हुने, दुःख बढ्ने हुन्छ।३. माझी औँला : माझी औँलाको तलपट्टी रहेको सूर्य पर्वतमा यो निशान देखिएको अवस्थामा धन हानी हुनेछ भने विस्तारै विस्तारै आफ्नो इज्जत प्रतिस्ठा पनि हराउँदै जानसक्छ।
४.कान्छी औँला: हातको कान्छी औँलाको तल रहेको बुध पर्बतमा यो निशान देखिएको अवस्थामा बिजनेशमा नोक्सान हुनसक्छ। कुनै कारणबस धन, पैसा हराउन सक्छ।५. हत्केलाको तल : हत्केलाको तलपट्टी बाँया साईडमा हुने चन्द्र पर्बतमा यो निशान देखिएको खण्डमा मानिसमा निर्दही पन देखापर्छ, मानविय भावनामा कमी हुनसक्छ।६. अँगुठाको तल : अँगुठाको तलपट्टी हत्केलामा हुने शुक्र पर्वतमा यो निशान देखियो भने प्रेममा तनाव तथा बिछोड हुनसक्छ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,